जनताले समृद्धिको एजेण्डालाई अनुमोदन गरेका छन् — Chetana Online
प्रतिनिधि सभा सदस्य, दाङ क्षेत्र नं. ३
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हिराचन्द्र केसी यसपटकको निर्वाचनमा जनताले समृद्धिको एजेण्डालाई अनुमोदन गरेको बताउनुहुन्छ । आम जनताले कम्युनिष्ट नेतृत्वको स्थिर सरकार चाहेको उहाँको भनाई छ । केसीसँग निर्वाचन परिणाम, दाङको विकास, पार्टी एकता लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर चेतना अनलाइनका सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कस्तो अनुभूति भएको छ ?
मलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाता ज्यूहरुमा म सबैभन्दा पहिले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
आम मतदाताहरुले वाम गठबन्धनको एजेण्डा मन पराएर हामीलाई मतदान गर्नुभएको छ । जनताले समृद्धिसहितको शान्ति चाहेका छन् भन्ने कुरा मत परिणामले पनि स्पष्ट पारेको छ । जनताको सेव ागर्ने नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्न पाउँदा अवष्य पनि खुशी अनुभव भएको छ । मैले यो जितलाई मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि आम जनताको जित सम्झेको छु । यसलाई मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि सामुहिक रुपमा ग्रहण गर्ने प्रणय गरेको छु ।
मतदाताहरुले तपाईलाई नै किन रोजे ?
यो मतदाताहरुलाई सोध्ने प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई । अर्को कुरा मतदाताहरु सचेत भइसकेका छन् भन्ने कुराको पनि यसले पुष्टि गरेको छ । आम जनताहरु समृद्धिको पक्षमा छन् ।
हामीले घोषणापत्रमार्फत् दाङको समृद्धिको खाका कोरेका छौं । यो खाका लागि पूरा गर्नका लागि अब हामीले स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने छ । मतदाताले मैले जनताको काम गर्न सक्छु भन्ने कुरा विश्वास गर्नुभएको छ । यो विश्वासलाई मैले निराशामा बदल्न दिनुहुँदैन भन्ने कुरामा म निकै सचेत छु । अर्को कुरा जनताले वामपन्थी नेतृत्वमा स्थितर सरकार चाहेका छन् । जनताले निर्वाचनमा दिएको मतले पनि त्यो देखिन्छ ।
तपाईको मुख्य एजेण्डा के हो ?
तत्कालीन रुपमा दाङलाई ५ नं प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरा नै मेरो सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय हो । म अहिले दाङलाई ५ नं प्रदेशको राजधानी बनाउने पहलमा छु । हामी हाम्रो मिसनमा सफल हुन्छौं । अर्को कुरा समृद्ध दाङ बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । समृद्ध दाङ बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट भूमिका खेल्ने छु ।
५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङमा बनाउनुपर्छ भनेर पहल भइरहेको छ । दाङमा राजधानी बन्न के छ आधार ?
दाङमा प्रादेशिक राजधानी बन्नका लागि धेरै आधारहरु छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण दाङमा प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जमिन थुप्रै छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका गुठी संस्थानहरुको हजारौं बिगाह जग्गा दाङमा छ । यसले गर्दा सरकारले मुआब्जामा धेरै लगानी गर्नुपर्दैन ।
दाङ वातावरणीय हिसाबले निकै उपर्युक्त जिल्ला हो । यहाँ ३ सय ६५ दिन नै हवाई उडान गर्न सकिन्छ । दाङमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो कहिले पनि लाग्दैन । यसकारणले गर्दा दाङमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सजिलो हुन्छ । मौसम सधैं सफा हुने र तापक्रम पनि त्यति उच्च र न्यून नहुने भएकाले यहाँ राजधानी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो ।
अन्य जिल्लाहरुको प्रस्ताव आएको छ । दाङ नै किन उपर्युक्त छ ?
प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशमा पूर्व नवलपरासीदेखि पश्चिम बर्दियासम्मको भुगोलको अध्ययन गर्ने हो भने दाङ मध्यभागमा पर्छ । यो प्रदेशका सबै जनतालाई दाङ पायक पर्छ ।
अर्को कुरा दाङमा दुई वटा उपत्यका रहेका छन् । देउखुरी उपत्यका र दाङ उपत्यका । दाङ उपत्यका प्रत्यक्ष भारतको सिमासँग जोडिदैन । भारत जानको लागि देउखुरी उपत्यका भएर जानुपर्छ । रणनीतिक सुरक्षाको दृष्टिले पनि दाङ राजधानी बन्न उपर्युक्त छ ।
पछिल्लो समय दाङमा उद्योग धन्दा धमाधम खुलिरहेका छन् । दाङमा औद्योगिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्रबनाउन प्रशस्त जमिन छ । राजधानी बन्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै कुराहरु दाङमा छ । अन्य जिल्लाबाट प्रस्ताव आउनुलाई हामीले त्यति नकारात्मक रुपमा बुझ्नुहुँदैन । उहाँहरुले आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्छ भन्नु स्वभाविक होला । तर, हामीले सबैलाई पायक पर्ने र उपर्युक्त ठाउँमा बनाउनुपर्छ । दाङलाई हामीले ६ नं र ७ नं प्रदेशसँग जोड्नुपर्छ । साथै यहाँका बाहिरी जिल्ला जोड्ने सडकहरुलाई हामीले तीव्र रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
कुन कुन सडक प्राथमिकतामा पार्नुपर्ला ?
सडक सञ्जाल विस्तार विना विकास सम्भव छैन । यसका लागि हामीले आन्तरिक र बाह्य जिल्ला जोड्ने सडक सञ्जालहरुलाई बनाउनुपर्छ । हामीले दाङ–सुर्खेत सडकको कामलाई तीव्र रुपमा बनाएर ६ नं प्रदेशसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड्नुपर्छ । त्यसैगरी घोराही–मुकुर्टी–देविस्थान सडकलाई तत्काल कालोपत्रे गरेर प्यूठान हुँदै पोखरा जोड्ने सडक बनाउनुपर्छ । रोल्पा जोड्ने सहिद मार्गलाई तत्काल स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी भारत जोड्न लमही–कोइलाबास सडकलाई तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ । त्यैगरी आन्तरीक रुपमा लमही–तुलसीपुर सडकलाई चौडा बनाउनुपर्छ । अन्य सबै वडा स्तरीय सडकहरुलाई ग्राभेल गर्दै कालोपत्रे गर्नुपर्छ ।
दाङको विकासका आधारहरु के हुन सक्छन् ?
कृषि उत्पादन नै दाङको प्रमुख विकासको आधार हो । दाङमा प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । जमिनको संरक्षण गर्दै व्यावसायिक खेती गर्न सकेको खण्डमा दाङले विकासको गति हासिल गर्न सक्छ । त्यसैगरी यहाँको पर्यटन व्यवसाय, औद्योगिक विकास पनि विकासका आधारहरु हुन् । यहाँको भौगोलिक वनावटले पनि उद्योग धन्दाहरु खोल्न सजिलो छ । यहाँ जनशक्तिको पनि कुनै अभाव छैन ।
तपाईहरु चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनाएर जानुभयो । तपाईहरुले गठबन्धन पार्टी एकतासम्म पुग्छ भन्नुभएको थियो । निर्वाचनको बेलामा दुई पार्टीका कार्यकर्ताहरुबीच कस्तो सम्बन्ध पाउनुभयो ?
यो निर्वाचन परिणाम पार्टी एकताको पनि म्याण्डेट हो । निर्वाचनको बेलामा कार्यकर्ताहरुबीच देखिएको उत्साहले पनि पार्टी एकतामा थप बल पैदा भएको छ । पार्टी एकता हुनै पर्छ । पार्टी एकता चाँडै हुन्छ । यसमा कोही पनि दुविधा हुन जरुरी छैन । अहिले दुबै पार्टीका अध्यक्षहरुले पार्टी एकताको लागि गृहकार्य पनि गरिरहनुभएको छ । सरकार निर्माणलगत्तै पार्टी एकताको काम पनि तीव्र गतिमा हुन्छ । निर्वाचनमा दुबै पार्टीका कार्यकर्ता एउटै पार्टीजस्तो भएर परिचालित भएका छन् ।
पार्टी एकताको आधार के हुन सक्छन् ?
हामीले हाम्रो चुनावी घोषणापत्रमार्फत अब मुलुकको बाटो कस्तो हुने भनेर खाका दिइसकेका छौं । अर्को कुरा वैचारिक पक्षमा पनि कुरा भइरहेको छ । समृद्ध मुलुकसहित समाजवादी बाटोमा जाने हाम्रो साझा एजेण्डा हो ।
सांगठनिक रुपमा हामीले निर्वाचनमा ६०/४० को अभ्यास ग¥यौं । एकता गर्दा पनि यही सूत्र प्रयोग गरेर टुंगो लाग्छ । सबै कुरा अहिले नै भइहाल्छन् भन्ने होइन । केही कुराहरु तत्काल समाधान हुन्छन् । केही मिल्न बाँकी रहेका विषयहरु हामीले महाधिवेशनमा लगेर पूरा गर्छौं ।
केहीले पार्टी एकता हुँदैन भन्छन् त ?
कुनै पनि इमान्दार कम्युनिष्ट पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी एकता हुँदैन भन्दैन । यदि कोही यस्तो भन्छन् भने त्यो सच्चा नेता कार्यकर्ता होइन् । मैले अगाडि पनि भने पार्टी एकता हुन्छ । यसलाई रोक्ने अथवा विथोल्ने प्रयास नभएको होइन तर, अब पार्टी एकतालाई कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन ।
प्रकाशित मिति: January 05, 2018